ျမန္မာ့ သံယံဇာ တ က်ိန္စာ မိေနေသာ ရွီနဂါး နဲ႕ ၾကည့္ေကာင္းေ တာ့မယ့္ပြဲ….. – EverBestMM
Ever Y | June 30, 2020 | Update News | No Comments
က မ႓ာ စစ္ျဖစ္ လ်ွင္ လူထု‌ေခါင္းေဆာင္ ကို ဖက္ထား ပါ….
မြန်မာ့ သံယံဇာ တ ကျိန်စာ မိနေသော ရှီနဂါး နဲ့ ကြည့်ကောင်းေ တာ့မယ့်ပွဲ
က မ႓ာ စစ်ဖြစ် လျှင် လူထု‌ခေါင်းဆောင် ကို ဖက်ထား ပါ….
အကြပ်တည်း က လွတ်မြောက်အောင် စစ်ရေး နဲ့ ခြိမ်း‌ခြောက် ပြမနေနဲ့နော် သာကော မင်းပြလည်း ဒီဘက်က လူတွေက ခွင့်မလွှတ်ဘူး နောက် မဆုတ်ဘူး ဒယ်ဒယ်ခြင်း ရွေ့မည့် အကွက် သူ‌တွေ‌ ဆိုတော့ ပြေးမ လွတ်တော့ဘူး
နိုင်ငံရေး အရရော စစ်ရေးအရရော မှာ…အခု အီရန်ပါ ပါလာပြီဆိုတော့ ပွဲက ကြည့်ကောင်းရုံ မဟုတ်ဘူး တကယ်ဖြစ်ပြီပဲ ဒီပုံစံအတိုင်းဆို… အီရန်က အခု ထရန့်တို့ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာဟာ အကြောင်းပြရုံ သက်သက်ပါ တရုတ်နဲ့ စစ်ပွဲအတွက် ခြေလှမ်းတာ ကို ပေါင်းတိုက်မည် ဟု ပေါ်တင် ဆီမစွတ်ရဲ လို့ အရိပ်မွတ် ပြော တဖက်လှည့်နဲ့ ဒဲ့ စိန်ခေါ်လိုက်တာ ပါပဲ
တရုတ်ဘာလို့ စစ်ပွဲ ကို ဖြစ်ချင်နေသလဲဆို အခြားနိုင်ငံရေး အကြောင်းအရာ ဖြစ်စဉ်တွေထက် လက်တွေ့က
သူ၏ စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ကမ႓ာကို အုပ်စိုး မည့်အကြံ ပလန် made in china 2025 အိပ်မက် ပျက်ပြားလို့ ၊ ဗိုင်းရက်နဲ့ ဟက်ဝေးရဲ့ အချက်လက်တွေ ပေါ်လာပြီး ကန်ဆီမှာ သက်သေအ ထောက်ထားတွေ ရှိနေလို့ တရားခံ လျော်ကြေးနဲ့ အမှုကိစ္စတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလို့၊ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စနဲ့ အတွင်းစည်း ပြိုလဲလာလို့ ၊ သူပြိုလဲရင် US က လက်စားချေမည် သို့ စစ်ရေး နဲ့ပါ အရေးယူခံရတော့မည် ဆိုတာ သိလို့၊ နိုင်ငံပြိုလဲ ရှီပြုတ်အကျ မခံနိုင်လို့ ၊ ပြိုလဲမည့် အတူတူ စစ်ရေးဖြင့် ကာဗာလုပ်ပြီး နိုင်ငံ ကို ကာကွယ်သည်ဟု သူ့ပြည်သူအား အ‌ကြောင်းပြ အာဏာဆက်လျက် ကိုင်ဆ‌ွဲထားဖို့ သူတို့အား ကမ႓ာမှ ဝိုင်းတိုက်ခိုက်သည်ဟု ပုံဖော်ပြီး သူ၏ အမှားများအား ပြည်ဖုံးကားချဖို့မကြာခင် သူ့နိုင်ငံပြိုလဲ‌တော့မည်ဆိုတာ သိလို့ စစ်ဖြစ်ပြီး ကြိုကာထား တောင့်ထားတဲ့ သဘောပါ…
US ဘက်က တွက်ရင်
အမေရိကန် နေရာကို ယူပြီး အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ကမ႓ာကို အုပ်စိုးမှာစိုးလို့ ၊ ထရန့် သမ္မတနေရာအတွက်နဲ့ ဗိုင်းရက်ကေ့ကို လက်စားချေပြရမည် ဒါမှ ထောက်ခံမှု ပြန်ရမည် တရုတ်နဲ့ စစ်ဖြစ်လျှင် ထရန့်ရော ရုရှား ပူတင် အတွက်ရော အာရှအတွက်ရော အဆင်ပြေ စိတ်ချ ရမည်ဖြစ်သည် နိုင်ငံရေးနဲ့ ကျုးကျော်မှုအတွက် တရုတ်သည် ရေရှည်ကမ႓ာအတွက် အန္တရာယ်ရှိ သည်ဟု မြင်လာပြီး အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းပ‌ ပျောက်ဖ့်ိုအတွက်နှင့် ကမ႓ာ့နိုင်ငံတွေ မပျက်စီးစေဖို့အတွက် အပြီးသက် အဆုံးသက်ပေးပြီး နိုင်ငံရေးအရ ပြောင်းလဲပေးရ မည့် နိုင်ငံဖြစ်လေသောကြောင့်
သို့ကြောင့် .. မူလအစကတည်းက နိုင်ငံရေး ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းခဲ့တဲ့ တကမ႓ာလုံးကို ဖျက်စီးပြီး အုပ်စိုးဖို့ ကြံနေတဲ့ တရုတ်နဂါး သာကောပေါက်ဖော်ကို ဘယ်နိုင်ငံမှ လက်မခံတော့ပဲ ကမ႓ာ့မြေပုံပေါ်ကနေ အပြီး ဖျောက်ကာ အသစ်တဖန် ပြန်လည် တည်ဆောက် လာစေမလားဆိုတာ
သို့ဖြင့် ယခုလို မဖြစ်စေချင်ရင်
– ရှီကို ဖြုတ်ချ
– တကမ႓ာလုံး လျော်ကြပေး
– နည်းပညာမခိုးတော့ဘူး ဝန်ခံ လက်မှတ်ထိုး
– US နဲ့ နည်းပညာ နိုင်ငံရေးအရ နှစ် ၂ဝလောက်ကွ ာဟ ခံ
– နိုင်ငံကို အသစ်ကနေ ပြန်စ
– ကမ႓ာ့ရပ်တည်မှု အဆင့်မှာ မြန်မာထက် နိမ့်ကျ သွားတော့မည် ဖြစ်ရာ
ရှီမှ လည်း ဒီက အဘ‌တွေလို ထိုသို့ အဖြစ် ခံမှာ မဟုတ်ပဲ အသေခံပြီး တိုင်းပြည် ကို အလုံးစုံ ချနင်း ပြည် သူကို ကာဗာလုပ်ပြီး ရသလောက် သူ့ကိုယ်ကျိုး အာဏာ အတွက် တပါတည်း အပါခေါ်ကာ မိုက်ရူးရဲဆန် ဖျက်စီးသွား မည်ဖြစ်ရာ
ယခုမှ တရုတ်ကို ကြည့်ပြီး ..
ရိုးမတောကြီး နဲ့ ဖားကန့်တွင်းကြီး မြင်ယောင်ပြီး ကြည့်ပြီး အားရပါးရ ရယ်မောနိုင်လေပြီ ဖြစ်ရာ FB ပေါ် တွင် ကြည့်မိသော တရားဟော ဆရာ တစ်ဦး ‌ပြောသလို တချိန် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်ထက်ချမ်းသာ ရမည် တရုတ်တွေဟာ မြန်မာတွေထက် ဆင်းရဲနိမ့်ကျသွား လိမ့်မည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာ့မြေရဲ့ သံယံဇာတ ကျိန်စာဟာ တရုတ်ကို ခိုက်လာ‌နေပြီဆိုတာ ယခု လက်တွေ့သက်သေပင် မဟုတ်ပါလား သို့ကြောင့် ဤအရာကို မည်သူမျှ မယုံလည်း ဇမ္မ ူဒီပါတောင်ကျွန်း သြဘာနမိတ်ထွန်းတဲ့ အရပ်ဒေသမို့ ကျုပ်တို့က ယုံကြည်သည်
သို့ကြောင့် တရုတ်အလုံးစုံ ပျက်ပြားရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံကို ဖျက်စီးနေသော အာဏာရှင် လက်နက်ကိုင်များ အလုံးစုံပျက်ပြားရေး၏ အဓိက အခရာ ဖြစ်သောကြောင့် ယခု စစ်ပွဲအား အိနိ််္ဒယဘက်မှ ရပ်တည်ပြီး အားပေလေမည် ဖြစ်ပေရာ
စစ်ဖြစ်တာနဲ့ နိုင်ငံကို စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီး မယုတ်ညံ့လေအောင် ပြည်သူလူထုမှ အစိုးရအား ဝန်းရံ ပြီး ရပ်တည်မှု ယုံကြည်ခိုင်မာမှုဖြင့် နိုင်ငံဘေးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရမည်ဟု ပါဟု အလေးနက် တိုက်တွန်းလိုပါသည်
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တရုတ်က နိုင်ငံပြိုလဲခံရမှုကို ထက် စစ်ရေးကို ရွေးချယ်ပြီး ထွက်ပေါက်ရှာကာ သူ့နိုင်ငံအား ရသလောက် ကာကွယ်ကယ်တင်မည့်ပွဲဖြစ်သည့်အတွက်
ထို့အပြင် ဒီကအဘတွေ က ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ‌ခြေဥပြင်ဆင်ရေး အတွက် အာဏာ လက်လွှတ်ရမည် ကို စိုးသော ကြောက်သောကြောင့် ယခုပွဲ ကို ဖြစ်ချင်နေပြီး ဖြစ်တာနဲ့ နိုင်ငံလုံခြုံရေး အကြောင်းပြ အာဏာ သိမ်းမည် ဖြစ်လေရာ သူတို့အတွက် ယခုအရေး သည် အသက်ရှုချောင်ဖို့ ထွက်ပေါက်နှင့် အာဏာ ဆက်လျက်စွဲ ကိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး နတ်သကြားမကိန်း ဆိုက်လေသောကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို ့မှ လည်း ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ ကို အာဏာရှင်အောက် ပြန်မရောက် ဖို့အရေးနဲ့ ဘေးမဖြစ်ဖို့ တရုတ် အသုံးချခံ မဖြစ်ဖို့ရာ ပြည်သူအားလုံး ညီညွတ်ပြီး စည်းလုံးစွာ ကာကွယ်‌စောင့်‌ရှောက်ကြ ရမည် ဖြစ်သောကြောင့်
နိုင်ငံမှာ အစိုးရနှင့်ပြည်သူမှလွဲ စစ်တပ်သည် သီးခြားအဖွဲ့စည်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး အားကိုးမရဘူးဆိုတာ နိုင်ငံ အရေးကြုံလျင်‌တောင်မှ အာဏာလက်မလွှတ်ရေးကိုသာ အစဉ်တစိုက် ဦးတည်မည်ဆိုတာ သိထားပြီး သတိများဖြင့် ချည်းကပ်ကာ
ကမ႓ာ့အရေး မှာ နိုင်ငံ ပါမသွားဖို့ ဘေးမဖြစ်ဖို့ အရေးနဲ့ အာဏာရှင်များ ပျက်သုန်းမျော ပါသွားဖို့ အရေး ကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြပါ ဟု ပြီး ပြည်သူအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် မိမိအစိုးရအား လက်တွဲ ကိုင်မြဲထားပြီး
လူထု‌ခေါင်းဆောင်နောက် မှာ ရပ်တည် လိုက်ပါ နားထောင် ဂရုစိုက်ကြပါ ဟု အသိပေး လိုက်ရပါ၏ ။
ကိုဗစျ-၁၉ ကွောငျ့ စီးပှားရေးထိခိုကျမှုကို ကာကှယျရနျအတွက် သုံးသငျ့သုံးထိုကျသော အသုံးစရိတျမြား သုံးမညျဟု သမ်မတပွော
စ ကားမေျပာတတ္ တဲ့ ကြမ္ရင္ေလးတစ္ပါးေတြ႕ရိွထား ပါတယ္…(ကူညီမွ်ေ၀ေပး ပါအံုးရွင့္)